वरिष्ठ pupils लागि विद्यालय sundresses छैन त लामो पहिले लोकप्रिय बन्न सुरु गरेका छन्। हाल सम्म, यस्तो कुरा मात्र प्रारम्भिक वा मध्य प्रबन्धकहरू मा प्रयोग गरिन्छ। तर, विद्यालयमा फारम नै फिर्ता गर्न यति लामो समय पहिले छ। धारी संग नीलो सूट अब विद्यार्थीहरूको उपस्थिति राज्य स्तरमा एकीकृत छैन - जब वर्ग मा बालिका मात्र खैरो ऊन एक एप्रन पोशाक र केटाहरू थिए सोभियत युग, गर्न विपरीत। प्रत्येक विद्यालयको प्रशासन आफ्नो पोशाक कोड प्रवेश गर्छ। कहीं सबै विद्यार्थीहरू नै आकार किनेको वा आदेश सिलना, र कतै बस लम्बाइ र वस्त्र को रंग लागि केही खास आवश्यकताहरू voicing। र यहाँ आधुनिक उच्च विद्यालय विद्यार्थी मा कल्पना लागि कोठा छ। आखिर, किशोर बालिका सधैं जवान खुसी पार्न डाह प्रेमिका राम्रो हेर्न चाहन्छु।
एक उच्च विद्यालय विद्यार्थी लागि एक स्कूल sundresses छनौट, तपाईंले केही नियमहरू विचार गर्न आवश्यक छ। पहिलो - यो रंग। परम्परागत व्यापार शैली लागि कालो तल र सेतो शीर्ष मानिन्छ। तर यस्तो संयोजन गर्न सीमित छैन आवश्यक छ। आखिर, शुद्ध रंग को आदर्श मानव आँखा, फरक तिनीहरूलाई मानते किरा प्रयोग गरिन्छ जो सामाग्री, बनावट, रंग, र अन्य रंग को प्रकार, आधारमा अवस्थित छैन। र वरिष्ठ pupils लागि sundresses गर्न नीरस जस्तो छैन, तपाईं खैरो, बुरगुण्डी, नीलो, हरियो, खैरो रंग ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। र रंग को विविधता पनि अधिक। तिनीहरूले वास्तविक पट्टी र सेल छन्। लम्बाइ लागि, यो मिनी स्कूल मा राख्न असम्भव छ। पोशाक हत्केलामा को चौडाई सम्म को गोडा माथि हुन सक्छ। , Squatting तल बसिरहेका र माथि रही, सिढी आरोहण, केटी निरन्तर उनको स्कर्ट मा tugging छैन, सहज हुनुपर्छ।
"केस" सधैं राम्रो प्रकार शैलीहरू छ। को flirtatious बालिका लागि संग मोडेल फिट गोठभित्र मा स्कर्ट। यो सजावटी बटन, पट्टा, ruffles, insertions, buckles, वाल्व, flounces हेर्न रोचक छ। तिनीहरूले स्कूल वर्दी को "को पट्टाइ kicked"।
सफल भने, उच्च विद्यालय विद्यार्थी लागि सामान जस्तै स्कूल sundresses को चयन वर्ग मा, तर पनि जवान संग एक पैदल लागि मात्र होइन थकित गर्न सकिन्छ।
Sundress पूरक एक ब्लाउज वा शर्ट हुन सक्छ। सेतो रंग solemnity को छवि दिनेछु। र तपाईं हरेक दिन लागि मौन रङ्गिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि मनमा सार्ने गर्नुपर्छ त्यहाँ एक बेल्ट हो भने, यो टोन ब्लाउज मा नजिक हुनुपर्छ भनेर।
अब, धेरै निर्माताहरु र डिजाइनर वरिष्ठ pupils लागि विद्यालय sundresses भर पर्छन्। फोटो मोडेल OGGI, एच एन्ड एम, Zarina, साधारण, Zara र अरूलाई जस्तै यस्तो पसलहरूमा निर्देशिका पाउन सकिन्छ। तिनीहरू वैविध्यपूर्ण र धेरै मूल हो।
वरिष्ठ pupils लागि विद्यालय sundresses पनि सही सामान को चयन चाहिन्छ। यो शायद एक सख्त "केस" मा राख्न सकिँदैन र जूता मा राख्न। निस्सन्देह, यहाँ थप सान्दर्भिक क्लासिक जूता छन्। एडी स्वीकार गर्न सकिने छ, तर थप5सेमी भन्दा। यो स्कूल जुत्ता एडी गर्न सिफारिस गरिएको छैन। अन्य सामान पनि धेरै हुनु हुँदैन। Headbands, स्कार्फ, सम्बन्ध, brooches, बेल कलर, रोडा - यो स्वाद र संयमता संग चुनिएको सबै, एक उच्च विद्यालय को छवि पूरक हुनेछ र यसको व्यक्तित्व जोड हुनेछ।
जाडो माछा मार्ने लागि सुट "Norfin» (Norfin): विवरण, समीक्षा
Jogger - यो के हो? Jogger लगाउन के बाट
समुद्र तट लागि यस्तो सामयिक अंगरखा ...
छाला जैकेट लगाउने कसरी र के गर्ने?
"प्रारम्भिक सुरुवात" - जन्म देखि बच्चाहरु shkoly.Komplektatsiya गर्न, थप सामान समीक्षा लागि खेल जटिल
"माउ म्यू" - कलगुगा क्षेत्रमा एक फोहोर संग्रहालय
Marinated मशरूम एक सलाद कसरी तयार
अगाडि निलम्बन VAZ-2107: प्रतिस्थापन, मर्मत, मिलाउने, योजना र मूल्य
"शासकहरूले र sudiyam" जीआर Derzhavina को विश्लेषण
"Amoxiclav" बच्चाहरु समीक्षा। प्रयोग, analogs र जारी फारम लागि निर्देशन
दायाँ छोड्ने कसरी
उडान को भ्रम। दुनिया मा ऊंची टावर
कसरी pacifier देखि एक बच्चा wean गर्न
Reznik व्लादिस्लाव Matusovich: जीवनी, काम
छालाको ज्याकेट, कालो छाला जैकेट महिलाहरु
Johansson Scarlett - फिल्मोग्राफी, जीवनी र व्यक्तिगत जीवन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री र भूमिका को भूमिका